:: My Little World ::: May 2008
ဒီနေ့Google မှာ သိချင်တာလေးတွေ လိုက်ရှာနေရင်း Google Website ရဲ့ Favicon ပြောင်းသွားတာကို သတိထားမိတယ်။ ရောင်စုံ capital letter ကနေ အပြာရောင် small letter ကို ပြောင်းသွားတာပါ။ အပြာရောင်လို့ထင်တာပဲ။ အရောင်က ခရမ်းလိုလို အပြာလိုလို။ ဘယ်တုန်းက စပြီး ပြောင်းနေတာလဲ၊ ဘာလို့ ပြောင်းတာလဲ သိချင်စိတ်နဲ့Google လုပ် ကြည့်တော့ မေ ၃၀ မနက် ယူအက်စ် အချိန်မှာ ပြောင်းသွားလို့ သိရတယ်။ ဒီမှာတော့ မေ ၃၁ ရက်နေ့ရှိပြီ။ Official Google Blog မှာတော့ အဲ့ဒီ အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘာမှ ရေးထားတာ မတွေ့ ဘူး။
Old Favicon :
New Favicon :
Google က Google's Style ဆိုပြီး Home Page က Logo ကို အမြဲ ပြောင်းလေ့ ရှိသလို Favicon ကို ပြောင်းဖို့ များ စိတ်ကူးနေသလား မသိဘူး။ ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး။ သတိထားမိလိုက်တာလေးကို ထွေထွေထူးထူး၊ လုပ်စရာ မရှိပဲ အားနေတာနဲ့ရေးလိုက်တာပါ။
Holiday Logos and Events - Google style!
Posted by Nay Nay Naing at 5/31/2008 02:19:00 PM6comments
Our Helping Hands To Nargis Survivors
Update(02 June 2008) : Comment တွင်ရရှိသော request ကြောင့် ဤပိုစ့်တွင် မူလက တင်ထားသော mp3 file ကို ဖယ်ရှားထားပါသည်။
FYI: I am khin mg thant (Iron Cross)who organized to produceasong regarding to Nargis donation.Our works not finish yet.But the song has been exposed to the website some unscrupulous people.Our intention is to donate for Nargis people . The singers also contributed out of their own heart for donation .Please i have to request not to use this song at this time. After we have donated you can use it If it is in ur blog pls cancel it .By helping us you r helping them also we hope u r inaposition to help .Thanks for ur help.Please forward to other blog who might use this song
လေးဖြူ၊ ဟယ်ရီလင်း၊ မျိုးကြီး၊ ဆုန်သင်းပါရ် နှင့်အဆိုတော်ပေါင်းများစွာ
Credit to LinLetKyalSin
Labels: Lyrics, Music, Myanmar
Posted by Nay Nay Naing at 5/30/2008 07:43:00 PM3comments
Inameeting： Training： Tea break：
Before noon on weekend： Ready for getting off work：
Got today's target from boss：　 Tough target：
OT for 2hrs： OT forawhole night：
Made mistakes in work： Little achievement：
* * * * * * * * * * * * * * * * * * The End * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Credit to AKT
Labels: Cute, Funny, Job
Posted by Nay Nay Naing at 5/30/2008 01:00:00 PM2comments
How to plan 2009 leaves - Singapre
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ပို့ ပေးတဲ့ StraitsTimes သတင်းစာက Maximise Your Leave 2009 ဆိုတဲ့ Cut-And-Keep Guide ကိုကြည့်ပြီး နောက်နှစ် အတွင်း ဘယ်ရက်တွေမှာ ခွင့်ယူရင်ကောင်းမလဲ စဉ်းစားနေတယ်။ ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်၊ အားလုံးလဲ အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင် ၂၀၀၉ နိုဝင်ဘာ လ အတွင်းမှာ ခွင့်ယူဖြစ်မယ် ထင်တယ်။ ခုမှ ၂၀၀၈ နှစ်လယ်တောင် မရောက်သေးတော့ ၂၀၀၉ အတွင်း ခွင့်ယူဖို့စဉ်းစားနေတယ် ဆိုတာ အရမ်းများ စောနေသလား။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီကြားထဲမှာ ရန်ကုန် မပြန်ဖြစ်ခဲ့ရင် ၂၀၀၉ နိုဝင်ဘာမှာ ခွင့်ယူပြီး ပြန်မယ်။
Maximise Your Leave 2009 - Singapore - Uploadadoc
Read this doc on Scribd: Maximise Your Leave 2009 - Singapore
၂၀၀၉ အတွက် စဉ်းစားနေတာ ၂၀၀၈ အတွက်တောင် ခွင့်ယူမယ့်ရက်တွေ မတင်ရသေးဘူး။ ဒီရက်ပိုင်း အတွင်းတော့ ခွင့်တင်မှ ဖြစ်တော့မယ်။ ၂၀၀၈ အတွက် ခွင့်ယူမယ့် Plan က ရှိပြီးသား။ လိုချင်တဲ့ ရက်မှာ ခွင့်ရပါစေ၊ အစစအရာရာ အဆင်ပြေပါစေ ဆုတောင်းနေရတယ်။
Credit to PCheeYong
Posted by Nay Nay Naing at 5/29/2008 02:46:00 PM2comments
အခုနောက်ပိုင်း တစ်နေရာရာ သွားရမယ်ဆို map.gov.sg ရဲ့ StreetMap@Singapore ကို သုံးပြီး အရင် ရှာကြည့် ဖြစ်တယ်။ အလုပ်က သူငယ်ချင်း တစ်ယောက် StreetDirectory က မှာ ပုံတွေ မမြင်ရတော့၊ တနေရာရာ သွားဖို့ ရှိတယ်ဆို ရှာရတာ အဆင်မပြေဘူး ပြောလာတာနဲ့ဒီဆိုဒ်ကို ပြလိုက်တာ သူမသိဘူး။ တစ်ခါမှ မသုံးဖူးဘူးတဲ့။ ကျွန်မလည်း အရင်က ဒီဆိုဒ်ကို မသိပါဘူး။ ဟိုအရင်ထဲက ကျွန်မတို့အမြဲသုံးနေကျ StreetDirectory.com မှာ ပုံတွေ မမြင်ရတော့မှာသာ Google နဲ့လိုက်ရှာရင်း တွေ့ လို့သုံးဖြစ်သွားတာပါ။ အရင် StreetDirectory သုံးတာ အကျင့်ပါနေတော့ အခုဆိုဒ်သုံးရတာ သိပ်အဆင်မပြေဘူး။ ဒါပေမယ့် ရှိနေတာလေးကိုပဲ ရအောင် သုံးရတော့တာပေါ့လေ။
ဒါနဲ့StreetDirectory က ပုံတွေ ဘာလို့မမြင်ရတော့တာလဲ သိချင်တယ်ဆိုရင် ဒီမှာ ဖတ်ကြည့်လို့ ရပါတယ်။
Labels: Singapore, WebSite
Posted by Nay Nay Naing at 5/28/2008 06:14:00 PM4comments
No Internet @ Home
မနေ့ ညက ထူးထူးဆန်းဆန်း စောစော အိပ်ဖြစ်သွားတယ်။ အိမ်မှာ မနေ့ က ည ၈ နာရီ ကျော်လောက်ကစပြီး အင်တာနက် မရဘူး။ Connection ရှိနေတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်ဆိုဒ် ဘယ်ဟာမှ ၀င်မရဘူး။ ဘယ်ကြောင့်လဲ လိုက်ရှာတော့ ကျန်တာအကုန် အဆင်ပြေတယ်။ Starhub ကနေ ဖြစ်နေတာ။ ဘာမှ လုပ်မရ။ အခု လက်ရှိ နေတဲ့ အိမ်မှာ အင်တာနက်က ကိုယ့်နာမည်နဲ့ လျှောက်ထားတာ မဟုတ်။ အိမ်ရှင် နာမည်နဲ့လျှောက်ထားတာ။ အိမ်ရှင်တွေက ဒီနိုင်ငံမှာ မရှိ။ Account No သိရင် တောင် StarHub ကို ဖုန်းဆက်လို့ရနိုင်သေးတယ်။ အခုတော့ Account နံပါတ်လဲ မသိ၊ အိမ်လိပ်စာကလွဲရင် Information မှ မသိ။ အရင် Bill အဟောင်းတွေ မှာကြည့်ရင် Account No သိနိုင်တယ် တွေးမိလို့Bill တွေ လိုက်ရှာတာ တစ်ခုမှ မရှိ။ နောက်ဆုံးတော့ ခုလို ဖြစ်တာ သိပ်ကြာမယ် မထင်ပါဘူး၊ အချိန်တန် ပြန်ကောင်းသွားမှာပါလို့စိတ်ဖြေတွေးလေးတွေးပြီး စောစော အိပ်လိုက်ရတယ်။ တော်သေးတယ် အရေးတကြီး လုပ်စရာ မရှိလို့ ။ ဟိုတစ်ခါ အင်တာနက် ပြဿနာ တတ်တုန်းက အရေးတကြီးလုပ်စရာ ရှိနေတော့ အတော်လေး အဆင်မပြေ ဖြစ်သွားခဲ့တယ်။ အင်တာနက် မရှိတဲ့ ဒုက္ခ။
ဒီမနက် တရေးနိုး ၃ နာရီလောက် ကြည့်တဲ့ အထိ အင်တာနက်က မကောင်းသေးဘူး။ Bill မဆောင်လို့့ ဖြတ်လိုက်တာလားလို့တွေးမိပြီး စိုးရိမ်သွားတယ်။ အိမ်ရှင် ဘယ်လို Bill တွေ ဆောင်သလဲ ကိုယ်လည်း မသိ။ ၇ နာရီလောက် အထိ အင်တာနက်က မရသေး။ အလုပ်သွားခါနီး ၈ နာရီလောက်မှာ ကွန်ပြူတာ ကြည့်လိုက်တော့ အင်တာနက် ရနေတာတွေ့ လိုက်ရလို့အတော်လေး စိတ်ချမ်းသာသွားတယ်။ အီးမေး တစ်ချက် စစ်မယ် လုပ်တုန်း Connection ပြန်ပြတ်သွားပြန်တယ်။ အပြင်မှာ မိုးတွေကလဲ သည်းကြီးမည်းကြီးရွာနေတယ်။ စိတ် မကြည်သာစွာနဲ့အလုပ် ထွက်လာခဲ့တယ်။ ၀င်းတံခါးနားရောက်မှ အခန်းထဲမှာ ဖုန်းမေ့ကျန်ခဲ့တာ သတိရလို့ပြန်တတ်ယူရသေးတယ်။ ဒီနေ့တမနက်လုံး အလုပ်လုပ်ရတာ စိတ်မဖြောင့်ဘူး။ ညနေ အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့ အခါ အင်တာနက် ပြန်ကောင်းနေပါစေ ဆုတောင်းနေတယ်။ မဟုတ်ရင် အလုပ်ရှုပ်အုံး တော့မယ်။
Update (28-May-2008): အင်တာနက် သုံးလို့ ရသွားပြီ။
Posted by Nay Nay Naing at 5/27/2008 03:05:00 PM7comments
You're always close at heart even though our lives are busier than they used to be... even though our phone calls usually catch one of us on our way out the door... and it's just not as easy to get together anymore...
of my favorite memories.
Happy Birthday, YTNW!!!
Posted by Nay Nay Naing at 5/25/2008 05:10:00 PM4comments
ဆရာတော် ဦးဇောတိက ဟောတဲ့ တရားထဲက အပိုင်းအစ တစ်ခု...
Growing Old is different from Grown Up;
Growing Old = getting older day by day
Grown Up = getting more mature spiritually (your way of thinking + elegant action + art of living)
though we know the definitions, we are never too careful about it's meaning.
Credit to Anatta
Labels: Notes, Quotation
Posted by Nay Nay Naing at 5/25/2008 03:04:00 AM0comments
Posted by Nay Nay Naing at 5/25/2008 02:26:00 AM3comments
Labels: Cartoons, Myanmar, News
Posted by Nay Nay Naing at 5/21/2008 09:41:00 AM3comments
Waiting On The World To Change - Johon Mayer
So we keep waiting (waiting...)
We keep on waiting (waiting...)
That's why we're waiting (waiting...)
So we keep on waiting (waiting...)
And we're still waiting (waiting...)
Now we keep on waiting (waiting...)
Posted by Nay Nay Naing at 5/18/2008 03:30:00 PM 1 comments
A special section, titled Myanmar (Burma) in Google News
ဒီနေ့ Google News မှာ Myanmar(Burma) ဆိုပြီး Section တစ်ခု တိုးလိုက်တာတွေ့ ရပါတယ်။ ခုအချိန်မှာ မြန်မာပြည် အခြေအနေကို တစ်ကမ္ဘာလုံးက စိတ်ဝင်စား စောင့်ကြည့်နေရတဲ့ အချိန်ဆိုတော့ Google က မြန်မာပြည်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ နောက်ဆုံးသတင်းတွေကို အားလုံး ရှာရလွယ်အောင် ဒီ Section ကို ထည့်လိုက်တာ ဖြစ်မယ်။ အဲဒီ Myanmar (Burma) Section ကို အင်္ဂလိပ် ဘာသာနဲ့ ဖော်ပြသော Google News - Australia, Canada, India, Ireland, New Zealand , South Africa , UK and US version တွေမှာ တွေ့ နိုင် ပါတယ်။
Google News Myanmar(Burma) စာမျက်နှာရဲ့ အပေါ်နားမှာ Donation Link ကိုလည်း ထည့်ပေးထားတာ တွေ့ ရတယ်။
Source : Responding to the crisis in Myanmar (Burma)
Posted by Nay Nay Naing at 5/18/2008 04:20:00 AM0comments
Posted by Nay Nay Naing at 5/17/2008 05:01:00 PM0comments
rebtel.com မှာ Account တစ်ခု လုပ်ပြီးရင် မြန်မာပြည် ကို ၂ နာရီ 30 မိနစ် ကြာ Free ဖုန်းခေါ်လို့ ရကြောင်း သိရပါတယ်။ အင်တာနက်ကို သုံးပြီးခေါ်ရ တာ မဟုတ်ပဲ ကိုယ့်ရဲ့ ဖုန်းကနေ တိုက်ရိုက် ခေါ်ဆိုရတာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် သုံးရတာ ပိုပြီး အဆင်ပြေပါတယ်။
Free2hours 30 minutes call to Myanmar until 22-05-2008
Update : 17 May 2008
Fair-use policy allows you2hours to China. We have to limit the calls to Myanmar to 30 min (10 trial min for new users + 20 min for all users) since the amount of calls is starting to affect the quality.
ဒါဆို ကိုယ့်ရဲ့ Resigster လုပ်ထားတဲ့ ဖုန်းကနေပြီး အဲ့ဒီ သူတို့ ပေးတဲ့ နံပါတ်ကို တိုက်ရိုက် ခေါ်လိုက်ရင် (ရန်ကုန်က) ကိုယ် ခေါ်ချင်တဲ့ ဖုန်းကို ရောက်သွားပါမယ်။ အဲဒီလို ခေါ်တဲ့ အတွက် rebtel က သူတို့ ရဲ့ Service (IDD Call) ကို Free ပေးပေမယ့် ကိုယ့်ရဲ့ ဖုန်းမှာတော့ Local Charge နဲ့ ပေးရ ပါလိမ့်မယ်။ (Update: သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ပြောလို့ စမ်းကြည့်တာ Mobile နဲ့SignUp လုပ်ခဲ့ပေမယ့် Home Phone ကိုသုံးပြီး Rebtel ကပေးတဲ့ Local Number ကို ခေါ်တာလဲ ခေါ်လို့ ရပါတယ်)။
Phone number တစ်ခု ( Account တစ်ခု) က နေ မြန်မာပြည်ကို ၂ နာရီ ၃၀ မိနစ် IDD Free ပေးတာဆိုတော့ အိမ်ဖုန်း၊ အလုပ်ကဖုန်း၊ မိုဘိုင်းဖုန်း ရှိသမျှ ဖုန်းအကုန်လုံးနဲ့့ account တွေ လုပ်ပြီးခေါ် လို့ ရတာပေါ့။ ဖုန်း ၅ လုံး ရှိတယ်ဆိုရင် မြန်မာပြည်ကို ၁၀ နာရီ စကား ပြောလို့ရပြီ။ ရှိတဲ့ ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့Register လုပ်ပြီးပေမယ့် ရန်ကုန်ကို ခေါ်မကြည့်ရသေးဘူး။ စမ်းခေါ်ကြည့်ပြီးတဲ့ သူတွေ ပြောတာ ကတော့ အဆင်ပြေတယ်။ တချို့ ဆို ၁ နာရီလောက်တောင် ပြောဖြစ်တယ်လို့့ ပြောပါတယ်။ တချို့ ကလည်း အသံ သိပ်မကြည်ဘူး ပြောတာ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အလကားခေါ်လို့ခေါ်လို့ရနေတုန်း အမြန် ခေါ် သင့်တယ်။
Credit to okisan from NativeMyanmar and Mr.Programmer
Labels: FreeCall, Myanmar, News, WebSite
Posted by Nay Nay Naing at 5/16/2008 07:42:00 PM2comments
The results of the referendum! Believe It or Not???
မြန်မာပြည်မှာ မဲပေးခွင့်ရှိတဲ့ ဦးရေ ၂၂ သန်းကျော်ရှိတဲ့ အနက် ၉၉.၀၇ % က မဲပေးခဲ့ကြပြီး မဲပေးသူဦးရေရဲ့ ၉၂.၄ % နှုန်းက ထောက်ခံမဲ ပေးခဲ့ကြတယ်တဲ့…. ယုံလား…
ပွတ်ကာသီကာ မဟုတ်ဘူးနော်.. မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေက အခြေခံဥပဒေမူကြမ်းကို အပြတ်အသက် ထောက်ခံမဲတွေ ပေးကြတာ။ ၉၂% ထောက်ခံခဲ့တာတဲ့လေ.... ဒီစစ်အစိုးရနှယ်… ဘာကြောင့် မဲပေးသူများရဲ့ ၉၉.၉၉% က ထောက်ခံမဲ ပေးတယ်လို့မပြောတာလဲ မသိဘူး။ ၀.၀၁% က ပယ်မဲပေါ့။ ဒါမှမဟုတ် မဲပေးသူတွေ အားလုံး၊ ၁၀၀% လုံးက ထောက်ခံမဲ ပေးခဲ့ကြတယ်လို့ကြေညာလိုက်ပါတော့လား။ အဲ့ဒါဆို မကြုံစဘူး မဲပေးသူအားလုံး ထောက်ခံမဲပေးကြတဲ့ ထူးခြားလှတဲ့ ပြည်လုံးကျွတ် ပြည်သူ့ဆန္ဒခံယူပွဲကြီးဆိုပြီး ပိုနာမည်ကြီးသွားမှာ..
ဒီနေ့ ထုတ် မြန်မာပြည်ကထုတ်တဲ့ မြန်မာ့အလင်း၊ ကြေးမုံ နဲ့The New Light Of Myanmar သတင်းစာတွေရဲ့ မျက်နှာဖုံး ပြည့်လုနီးပါး ပါလာတဲ့ သတင်းခေါင်းစဉ်တွေ။ ဒီနေ့ ထုတ် သတင်းစာတွေကို အသေအချာ ဒေါင်းလုပ်လုတ် သိမ်းထားရတယ်.. သက်သေတွေပေါ့..
Posted by Nay Nay Naing at 5/16/2008 05:37:00 PM3comments
ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းများမှ ဒုက္ခသည်များအား နှင်ထုတ်နေ..
ဧရာဝတီတိုင်း လပွတ္တာမြို့ က ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွေမှာ ဒုက္ခသည်တွေ အစိုးရစီက အကူအညီမရတဲ့ အပြင် နှင်ထုတ်ခြင်း ခံနေရတယ်။ ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာ မနေ့ က (၁၄ ရက်နေ့ )အထိပဲ ဒုက္ခသည် ကယ်ဆယ်ရေး စခန်းတွေ ထားခွင့်ပြုမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေါပုံမြို့ နယ်က ကယ်ဆယ်ရေး စခန်းတွေမှာ ရှိနေတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေကို နှင်ထုတ်နေတယ်။ မဖယ်ပေးရင် စစ်တပ်နဲ့ ရှင်းမယ်လို့ခြိမ်းခြောက်ခံနေရကြောင်း သတင်းတွေကို ဒီဗီဘီမှာ ဖတ်လိုက်ရတယ်။
နယ်မြေအာဏာပိုင်တွေက ဒုက္ခသည်များအား မောင်းထုတ်နေ - DVB
ဒီနေ့မနက် တခြား ဆိုဒ်တွေနဲ့ဖိုရမ်တွေ လိုက်ဖတ်ရင်း ဒီသတင်း လုံးဝမှန်ကန် နေမှန်း သိလိုက်ရတယ်။ ရန်ကုန်တိုင်း အတွင်း ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွေကနေ လူတွေကို ပြန်ဖို့ ညွှန်ကြားထားကြောင်း သိရတယ်။ ရန်ကုန်မြို့ နယ်အတွင်း ရွှေပြည်သာ၊ လှိုင်သာယာ ကယ်ဆယ်ရေး စခန်းတွေ လုပ်ထားတဲ့ စာသင်ကျောင်းတွေ နဲ့ဘုန်းတော်ကြီး ပညာသင်ကျောင်းတွေ ကနေပြီးတော့လဲ ပြန်ခိုင်းနေတယ်ဆိုတာ သိလိုက်ရတယ်။
ဒီစစ်အစိုးရကတော့ ပြိုင်ဖက်ကင်းအောင် စာနာမှု့ ကင်းမဲ့ လှပါတယ်။ ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ ပြည်သူတွေကို ကိုယ်တိုင်လည်း မကူ၊ သူများတွေ ကူညီချင်တာကိုလည်း တားမြစ်ဟန့် တား၊ ကူတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ကြားက ဖြတ်ယူလုပ်တယ်။ အဲ့လို လုပ်နေတဲ့ကြားက ကူညီချင်သူတွေက နည်းလမ်းတွေရှာပြီး ဒုက္ခသည်တွေလက်ထဲ အလှူပစ္စည်းတွေ ရောက်အောင် လုပ်ဆောင်နေကြတော့၊ ကူညီသူတွေ လုံးဝ မကူညီနိုင်အောင် ဒုက္ခသည်တွေကို နှင်ထုတ်နေပြန်ပြီ။ ဟင်းး.. ဒီစစ်အစိုးရရဲ့ ဆိုးရွားမှု့ ကို နှိုင်းစရာ စကားလုံးတောင် ရှိတော့မယ် မထင်ဘူး။
တွေးမိတယ်။ ဒီ စစ်အစိုးရက ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွေမှာရှိတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေ အကုန်နှင်ထုတ်ပြီး မြန်မာပြည်မှာ လေဘေး ဒုက္ခသည် တစ်ယောက်မှ မရှိတော့ပါဘူး။ အခြေအနေအားလုံး တည်ငြိမ်အေးချမ်း သွားပါပြီဆိုပြီး သတင်းထုတ်မလို့ လား မသိဘူး။ နောက်ပိုင်း.. များပြားလှတဲ့ လေဘေးဒုက္ခသည်များ ပြန်လည်နေရာချထားရေးကို အမြန်ဆုံး၊ အထိရောက်ဆုံး ဘယ်ပြည်ပနိုင်ငံရဲ့ အကူအညီမှ မယူပဲ လုပ်ဆောင်နိုင်သော အစိုးရ ဆိုပြီး ကြေညာ ဂုဏ်ယူလေအုံးမလား။ ပြောလို့ ရတာ မဟုတ်ဘူး။ ဒီစစ်အစိုးရ အရှက်မရှိတာ အားလုံးအသိ ဆိုတော့ တကယ် အဲ့လိုလုပ်ချင် လုပ်နေမှာ..
Posted by Nay Nay Naing at 5/15/2008 02:42:00 PM3comments
နောက်ထပ် ဆိုင်ကလုန်း တစ်ခု မြန်မာပြည်နားမှာ စတင်ဖြစ်ပေါ်နေပြီလို့ ကုလသမဂ္ဂက သတိပေးလိုက်ကြောင်း Yahoo News မှာ တတ်တာ တွေ့ လိုက်ရပါတယ်။ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ အနောက်တောင်ဘက်မှာ စတင်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အဲဒီ ဆိုင်ကလုန်းဟာ နောက်လာမယ့် ၂၄ နာရီအတွင်းမှာ ကြီးထွားလာနိုင်တယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် UN မှာ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက တော့ အဲဒီ မုန်တိုင်းဟာ အင်အား အသင့်အတင့်လား၊ အင်အားပြင်မလားဆိုတာ အတိအကျ ကြိုတင်ခန့်မှန်းလို့ မရသေး ပြောကြား သွားပါတယ်။ ဒီသတင်းဟာ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ ကမ္ဘာ့ မိုးလေ၀သဋ္ဌာနရဲ့ ဋ္ဌာနခွဲတစ်ခု ဖြစ်တဲ့ တိုင်ဖုန်းသတိပေးရေးစင်တာ (JTWC) က လာတာလို့လည်း ပြောကြားသွားပါတယ်။
14th May 2008 01:30 PM
Breaking News အနေနဲ့တက်လာတာဖြစ်ပြီး သတင်းထူးတယ်ဆို Update လုပ်မယ် ပြောထားတဲ့အတွက် မူရင်း Yahoo News က သတင်းလင့်နဲ့တခြား မုန်တိုင်းသတင်းပေးနိုင်မယ့် Website တွေကို စောင့်ဖတ်ကြည့်နေဖို့လိုပါတယ်။ JTWC ဆိုဒ်မှာလည်း ကြည့်လို့ ရပါတယ်။
အင်အားပြင်းတဲ့ မုန်တိုင်းကြီး ဖြစ်မလာပါစေနဲ့ ၊ အမြန်ဆုံး အားပျော့ ပျောက်ကွယ်သွားပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်..
Update (15 May 2008): မနေ့ က ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ မုန်တိုင်းဟာ အားပျော့ ပျက်ပျယ်သွား ပြီ လို့ သိရပါတယ်။ သတင်းကောင်းပါပဲ။
Update (6:00 PM ): ဒီမှာကတော့ တွက်ချက်ထားတဲ့ မုန်တိုင်း ဖြတ်သန်းသွားနိုင်တဲ့ လမ်းကြောင်းပါ။ ရန်ကုန်၊ ပဲခူး၊ ဧရာဝတီ၊ ရခိုင်းပြည်နယ်တွေကို ဖြတ်သွားနိုင်ပါတယ်။
Source : http://metocph.nmci.navy.mil/jtwc.php
Website တွေမှာ ဖတ်ကြည့်ရသလောက်တော့ ဒီမုန်တိုင်းဟာ နာဂစ်လောက်တော့ ပြင်းထန်မယ် မထင်ဘူး။ ခုနက အိမ်ကို ဖုန်းဆက်လိုက်တာတော့ ရန်ကုန်မှာ မိုးတွေ အရမ်းရွာနေပြီလို့ သိရပါတယ်။ နာဂစ် ဆိုက်ကလုန်းကြောင့် အိုးမဲ့ အိမ်မဲ့ ဖြစ်နေကြတဲ့၊ မိုးမလုံ လေမလုံ နေရတွေမှာ ရှိနေကြမယ့် လေဘေးဒုက္ခသည်တွေ အတွက်တော့ စိုးရိမ်ရတယ်။ မကြာခင်မှာလဲ မိုးရာသီက ရောက်တော့မယ်။ :"(
F.Y.I : သတင်း လိုက်ရှာဖတ်ရမှာ အဆင်မပြေဘူးဆို NativeMyanmar Forum - Myanmar Storm Watch Topic မှာ မုန်တိုင်းသတင်းတွေ အလွယ်တကူ ဖတ်ရှု့ နိုင်ပါတယ်။ နေးတစ်ဖိုရမ်မာတွေက အဲဒီနေရာမှာ သူတို့ ဖတ်မိသမျှ၊ သတိထားမိသမျှ မုန်တိုင်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သတင်းတွေကို တင်ပေးနေတာ တွေ့ ပါတယ်။
Posted by Nay Nay Naing at 5/14/2008 03:20:00 PM0comments
ဖတ်၍ ခံစားမိသမျှ နာဂစ် အတွေ့ အကြုံ များ
ခုရက်ပိုင်း သတင်းတွေ အသေးစိတ် လိုက်ရှာ မဖတ်ဖြစ်အောင်၊ ဓာတ်ပုံတွေ၊ ဗီဒီယိုကလစ်တွေ မကြည့်ဖြစ်အောင် ကြိုးစားနေတဲ့ ကြားက ဖတ်ဖြစ်ပြီး ခံစားခဲ့ရတဲ့ ဘလော့ပိုစ့်တစ်ချို့ ..
Nargis True Story - Ko Boyz
မုန်တိုင်းဒုက္ခသည်များကို ကူညီစောင့်ရှောက်နေသည့် လမ်းမတော်လူငယ် ဘောလုံးအသင်းမှ ကိုကို နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း - SYSTEM64.DLL
နာဂစ်နဲ့ဂျာရစ် - zeRoTraSh
ရန်ကုန်သားတစ်ယောက်ရဲ့ ကိုယ်တွေ့ နာဂစ် - Mg Hla
Posted by Nay Nay Naing at 5/14/2008 10:57:00 AM0comments
နေရောင်အောက်က အသက်ရှူသံတွေ ရပ်တန့် မသွားဖို့ 
ကျွန်မ ရဲ့ သူငယ်ချင်းတချို့ ဟာ လေဘေးဒုက္ခသည်များကို လှူဒါန်းဖို့အစီအစဉ်လေးတွေ ဆွဲပြီး အလှူငွေများ ကောက်ခံ နေပါတယ်။ ပထဆုံး ပရော့ဂျက် အနေနဲ့ကောက်ခံတာကတော့ သံလျင် ၁၈ ကုန်းမှာ အိမ်ခြေ ၁၇၆ အိမ်အတွက် တာလပတ်တွေ ၀ယ်ပေးလှူရန် အတွက်ပါ။ တစ်အိမ်ကို ၄၅၀၀ ကျပ်ကျမယ်ဆိုတော့ စုစုပေါင်း ၇သိန်း ၉သောင်းကျော် ကြပါတယ်။ သဒ္စါတရားထက်သန်စွာ လှူဒါန်းချင်တယ်ဆို အသေးစိတ် အချက်အလက်တွေကို ဒီအောက်ကလင့်မှာ ဖတ်ရှူ့နိုင်ပါတယ်။
နေရောင်အောက်က အသက်ရှူသံတွေ ရပ်တန့် မသွားဖို့... ( Project one) until 13-May-2008 11:00 PM
ဒီပရော့ဂျက်အတွက် အလှူငွေတွေကို လာမယ့်အင်္ဂါ နေ့ (၁၃ရက် မေလ) ည ၁၁ နာရီအထိ ကောက်ခံမှာ ဖြစ်ပြီး ဗုဒ္စဟူးနေ့ မှာ ရန်ကုန်သို့့ အလှူငွေများ လွှဲအပ်မှာ ဖြစ်သည့် အတွက် လှူဒါန်းချင်တယ်ဆို အမြန်ဆုံး ဆက်သွယ် လှူဒါန်းဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
ဒီ ပရော့ဂျက် အပြီးတွင် တခြားလိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာ လှူဒါန်းရန် အစီအစဉ်လေးတွေ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်အုံးမှာ ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
Posted by Nay Nay Naing at 5/12/2008 11:08:00 AM0comments
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် Forward လုပ်ပေးတဲ့ ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ပါ။ အားလုံး ဖတ်ရှူ့ခံစားနိုင်ကြဖို့ထပ်ဆင့် မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
Credit to LKH
Posted by Nay Nay Naing at 5/12/2008 10:18:00 AM 1 comments
Free Calls to Burma from Austalia Telstra fixed-line phones (10-05-2008 to 19-05-2008)
Telstra offering free calls to Burma - thewest.com.au
Telstra is offering free calls for residential customers on their fixed-line phones
today(10th May 2008) until midnight on May 19.
Calls to Burma will be automatically billed at zero.
Austalia က Telstra အိမ်ဖုန်းသုံးသူတွေအတွက် သတင်းကောင်းပါ။ Australians တွေရဲ့ ကူညီစာနာမှု့ တစ်ခုလို့ ဆိုရမယ်။
အခု ရက်ပိုင်း မြန်မာပြည်ဖုန်းတွေက ရတချက် မရတချက်မို့ဖုန်းကတ်နဲ့ဆက်ရတာ အဆင်မပြေတာနဲ့တိုက်ရိုက်ပဲ ခေါ်လိုက်တာ များတယ်။ ကျွန်မလိုပဲ တခြားသူတွေလည်း တိုက်ရိုက်ခေါ်ကြမယ် ထင်တယ်။ ဒီ စင်္ကာပူနိုင်ငံက Starthub နဲ့Singtel ဖုန်းကုပ္မဏီတွေ Austalia က Telstra လို အလကား ခေါ်ခွင့်မပေးတောင် မြန်မာပြည်ကို တိုက်ရိုက် ခေါ်တဲ့ IDD call rate တွေ လျှော့ပေးရင် မဆိုးဘူး...
Posted by Nay Nay Naing at 5/10/2008 02:49:00 PM6comments
လေဘေးဒုက္ခသည်များအား တတ်အားသရွေ့ ကူညီကြပါစို့ 
လေဘေးသင့်ဒုက္ခသည်များအတွက် သင် ဘယ်မှာ လှူမလဲ
Nargis - (146 Photos) (*** 12 May 2008)
Body Aftermath - MyoChitMyanmar ( *** 10 May 2008)
Photos from Emails (Appoligies for disturbing scences) ( *** 09 May 2008)
The Australian - Multimedia ( 58 - Photos) ( *** 08 May 2008) credit to AKT
Picasa : Nargis Cyclone Hit (Photos from Myanmar Cupid Community Forum) *** (07 May 2008)
Flickr Photo (szin) (6 Photos)
Posted by Nay Nay Naing at 5/08/2008 03:57:00 PM 1 comments
Support victims of the cyclone in Myanmar
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဆုံးရှုံးမှု့ တွေကို လူသားချင်းစာနာတဲ့ ကမ္ဘာအဖွဲ့ အစည်းတွေက အားလုံးက ၀ိုင်းဝန်းကူညီ ပန့် ပိုးဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်။ အခုဆို Google ကတောင် မြန်မာပြည်မှ မုန်တိုင်းဒုက္ခသည်တွေအတွက် Donation လုပ်လို့ ရတဲ့ လင့်တစ်ခု (Support disaster relief in Myanmar (Burma) ) ကို သူရဲ့ Homepage မှာ တင်ပေးထားတာ တွေ့ လိုက် ရပါတယ်။ အဲ့ဒီမှာ ထည့်ဝင်လိုက်တဲ့ အလှူငွေတွေဟာ ယူအန် နဲ့ယူနီဆက်ဖ်ရဲ့ မြန်မာ့မုန်တိုင်း ကူညီကယ်ဆယ်ရေး ရန်ပုံငွေ အကောင့်ထဲကို တိုက်ရိုက်ရောက်သွားမှာပါ။
ပြည်ပက မြန်မာအသိုင်းအ၀ိုင်းတွေထဲမှာလည်း နိုင်ငံအလိုက် အလှူငွေတွေ ကောက်ခံနေတာကို တွေ့ ရတယ်။ နိုင်ငံအလိုက် ဘယ်လို၊ ဘယ်နေရာတွေမှာ ဆက်သွယ် လှူဒါန်းနိုင်ကြောင်း သတင်းပေးထားတဲ့ ဘလော့ပိုစ့်တွေကို ညွှန်းလိုက်ပါတယ်..
Singapore and Online PayPal Donation : Myanmar Cyclone Relief Donations ****
Singapore: Nargis မုန်တိုင်းဒဏ်ကြောင့် ဒုက္ခရောက်နေသော မြန်မာပြည်သူပြည်သားများအတွက် ကူညီကြရန် တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ခြင်း (Lin Let Kyal Sin) ****
England : Please give our peopleahand (Nine Nine Sanay) ****
USA -SF Bay Area: Burma Cyclone Relief Program (BCRP) ****
Thailand : ငွေကြေးနှင့် အ၀တ်အထည်များ ဆက်သွယ်လှူဒါန်းပါရန် (ကိုတိုး)****
Singapore, Russia, Korea , USA and England : ဆက်သွယ်လှူဒါန်းရန် နေရာများ - Help for Crisis with Cyclone Nargis ****
Posted by Nay Nay Naing at 5/07/2008 09:41:00 AM0comments
မနက်က ရန်ကုန်ကို ဖုန်းခေါ်လို့ ရလို့အမေနဲ့စကားပြောလိုက်ရတယ်။ အိမ်ဖုန်းကို ခေါ်လို့မရသေးဘူး။ ဟန်းဖုန်းကို ခေါ်မှ ရတယ်။ ရန်ကုန်မြို့ ထဲပိုင်းက အ်ိမ်ဖုန်းတွေကလွဲရင် တခြားနေရာတွေမှာ အိမ်ဖုန်းလိုင်းတွေ ပျက်နေတုန်းလို့အမေက သတင်းပေးတာပဲ။ အိမ်အကြောင်း သတင်းမေးဖြစ်တယ်။ အိမ်မှာ ရှိတဲ့သူတွေ ခုလို အခြေအနေမျိုးဆို အပြင်ထွက်မှာ မဟုတ်တာကြောင့် တခြားအကြောင်းတွေမေးလဲ သိကြမှာ မဟုတ်တဲ့ အတွက် မမေးဖြစ်ဘူး။ ကံကောင်းလို့အိမ်မှာ ဘာမှ ကြီးကြီးမားမား ထိခိုက်မှု့ မရှိတာ ဖြစ်ကြောင်း အမေက ပြောပြတယ်။
About my home from Yangon
အိမ်မကြီးဘက်မှာ ပြူတင်းပေါက် မှန်တွေ ကွဲသွားတာ၊ အိမ်ဘေးဘက်က ရေတံလျှောက်တွေ ပြုတ်ကျကုန်တာ ကလွဲရင် အရမ်းမထိခိုက်ဘူးလို့ သိရတယ်။ ဒါပေမယ့် ကားဂိုတောင်ဘက်က အမိုးအုတ်ကျွတ် တချို့ တော့ ကွာသွားတယ်တဲ့။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီမှာ အိပ်နေတဲ့သူတွေတော့ ဘာမှ မဖြစ်ဘူးလို့ ပြောပါတယ်။ မုန်တိုင်းဖြတ်တဲ့ညက ပြူတင်းပေါက်မှန်တွေ ကွဲသွားတော့ မိုးရေတွေဝင်တာ အတော်လေး ခပ်ထုတ်ယူမှ ရတယ်တဲ့။ အခုတော့ ပြုတ်ကျသွားတဲ့ ရေတံလျှောက်ကို ဖယ်ပြီး ပြူတင်းပေါက်တွေကို ရေမ၀င်အောင် ပြန်ကာထားလိုက်ပြီလို့ပြောပြပါတယ်။
ကံကောင်းလို့ ဘာမှ မဖြစ်တာလို့ဘာလို့ ပြောရတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်း အမေက ရှင်းပြတယ်။ ကျွန်မတို့ခြံအနောက်က ကပ်ရက် တောင်ကုန်းပေါ်မှာ ညောင်ပင်ကြီး တစ်ပင်ရှိတယ်။ မုန်တိုင်းကြောင့် အဲ့ဒီ ညောင်ပင်ကြီးလဲ သွားခဲ့တယ်။ ပုံမှန်အတိုင်းဆို ကျွန်မတို့ အိမ်ဘက်ကို ပြိုလဲကျဖို့ များရမှာပါ။ ကျွန်မတို့ အိမ်က အနိမ့်ပိုင်း၊ အပင်ကလည်း ကမ်းပါးပေါ်မှာရှိနေတာ။ အမြစ်ကလဲ ရေတိုက်စားထားလို့တ၀က်လောက်ပေါ်နေတယ်။ အရင်အကိုင်းတွေကျိုးတာဆို အိမ်ဘက်ကို ကျတာများတယ်။ ဒါပေမယ့် အပင်ကြီး ပြိုလဲသွားတဲ့ အခါမှာတော့ ကျွန်မတို့အိမ်ဘက်ကို မကျပဲ အဲ့ဒီကုန်းပေါ် တခြားတစ်ဖက်ကို လဲသွားတဲ့ အတွက် အိမ်တော့ ဘာမှ မဖြစ်ဘူး။ ညောင်ပင်ရှိတဲ့ ခြံထဲက အိမ်ကတော့ အတော်လေး ထိသွားတယ်၊ ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုတယ်။ ညောင်ပင်ကြီးက အကြီးကြီဆိုတော့ အဲ့ဒီအိမ်တင်မက အဲ့ဒီခြံနဲ့ ဆက်နေတဲ့ တခြားဘက်က ဆောက်လက်စ အိမ်အသစ်တွေတောင် အမိုးတွေ ထိသွားတယ်တဲ့။ ကျွန်မ အဲဒီ အပင်ကြီးရှိတာ မေ့နေခဲ့တာ။ အမေပြောမှ သတိရတော့တယ်။ မဟုတ်ရင် စိုးရိမ်စိတ်ပူနေမိမှာ။ အဲ့ဒီအပင်အကြောင်းပြောပြီးတော့ ကျွန်မ အမြဲ တောင်းစားနေကြ အိမ်ရှေ့ ခြံက မရမ်းပင်ကြီးကို သတိရလားလို့အမေက မေးတယ်။ ဘယ်မေ့မလဲ။ အဲ့ဒီအပင်က မရမ်းသီးတွေ သီးလိုက်ရင် ပြွတ်သိပ်နေအောင် သီးတာမို့အချဉ်ကြိုက်တဲ့ ကျွန်မ အမြဲ မျှော်နေကျ အပင်ကြီးလေ။ အဲဒီ အပင်ကြီးလည်း လဲသွားတယ်တဲ့။ ကျွန်မတို့ အိမ်နဲ့ ဆို မြေနီလမ်းလေးပဲ ခြားတယ်။ တည့်တည့် ဒီဘက်ကို လဲရင် ကျွန်မတို့ အိမ် ခြံစည်းရိုးပေါ်ကျမယ်။ ဟိုဘက်လဲရင် အဲ့ဒီအပင်အောက်မှာ ရှိနေတဲ့ တိုက်ပုလေး ပြားသွားမယ်။ ဒါပေမယ့် နှစ်ဖက်စလုံး ကံကောင်းတယ် ဆိုရမလား ဘယ်ဘက်မှ တည့်တည့်မလဲပဲ တစောင်းလဲသွားတဲ့အတွက် အပင်ရှိတဲ့ ခြံရဲ့ စည်းရိုးနဲ့ ၊ ကျွန်မတို့ဘယ်ဘက်ခြံက စည်းရိုးပဲ နည်းနည်းပျက်စီး သွားတယ်လို့ ပြောပြတယ်။ အဲဒီအိမ်လည်း ကံကောင်းတယ် ဆိုရမယ်၊ သူတို့ အိမ်ရှေ့မရမ်းပင်အောက်မှ ရပ်ထားတဲ့ ကားနှစ်စီး ဘာမှ မဖြစ်ဘူးတဲ့။ နောက်တစ်ခု ကျွန်မတို့အိမ်နဲ့ကပ်နေတဲ့ ဘယ်ဘက်ခြံထဲက အုန်းပင်တွေလည်း လဲသွားတာလဲ အိမ်ဘက်ကို မလဲပဲ အဲ့ဒီခြံဘက်ပဲ လဲသွားတဲ့ အတွက် အိမ်ကို မထိဘူးလို့ ပြောတယ်။ ဒီဘက်လဲမယ်ဆို အိမ်နဲ့ကွတ်တိ။ အမေ့ မှာ ကံကောင်းလို့ဘာမှ မဖြစ်တာဆိုပြီး တဖွဖွပြောနေလေရဲ့။ ပြောလဲ ပြောချင်စရာပါပဲလေ။
အမေပြောပြတာတော့ အိမ်နားမှာ ရှိသမျှ အပင်တွေ အကုန် မရှိတော့ဘူး။ ကုန်ပြီတဲ့။ ကျွန်မတို့အိမ်ရှေ့ က မချစ်စု သရက်ပင်လည်း အမြစ်ကနေ ကျွတ်သွားတယ်တဲ့။ အရင် ရင်ကွဲသရက်ပင်ကို ခုတ်ပြီး မချစ်စုပင်ပြောင်းစိုက်ထားတာ အခုမှ အသီးသီးခါစ ရှိအုံးမယ် ထင်တယ်။ အမေ စိုက်ထားတဲ့ ပုန်းညှက်ပင်လဲ မရှိတော့ဘူးတဲ့။ ညာဘက်ခြံမှာတော့ အဲ့ဒီအိမ်က အန်ကယ်ကြီး စိုက်ထားသမျှ နှစ်တိုင်း ဝေနေအောင် ပွင့်တဲ့ ကံကော်ပင်နဲ့သရက်ပင်တွေ၊ ရှောက်ချိုသီးပင်တွေ ရှိသမျှ အပင် အကုန် အမြစ်ကကျွတ် ကုန်ပြီ၊ ဘာမှ မကျန်ဘူးတဲ့။ အိမ်ရှေ့ နဲ့အိမ်နောက်က အုန်းပင်တွေအကြောင်းတော့ မမေးလိုက်မိဘူး။ ဘေးခြံက အပင်တွေတောင် လဲတယ် ဆိုတော့ အဲဒီ အပင်တွေလည်း ရှိတော့မယ် မထင်ပါဘူး။ ခြံနောက်က ပိန်းနှဲပင်လည်းရှိတော့မယ် မထင်၊ ရှောက်ပင်တွေလည်း ကုန်မှာပဲ။ စံပယ်ပင်တန်းတွေလည် ကျန်တော့မယ် မထင်ပါဘူး။
မနေ့ က အိမ်ကလူတွေ အလုပ်ကိစ္စတစ်ခုနဲ့မြို့ ထဲဘက်ထွက်ဖြစ်၊ ဘောက်ထော်ဘက်တွေ ရောက်ဖြစ်တဲ့အကြောင်း ပြောတယ်။ ဘောက်ထော်ဘက်မှာ အပျက်အစီးများတယ်လို့ပြောပြတယ်။ မြို့ ထဲမှာလဲ ပျက်စီးနေတာတွေ အများကြီးပဲ ရန်ကုန်မြို့ ဟာ တော်ရုံနဲ့နလံပြန် ထူနိုင်မယ် မထင်ဘူးလို့အမေက ပြောပြပါတယ်။ ဓာတ်ဆီဈေးက တဂါလံ ၁ သောင်း ဖြစ်နေတယ်။ ဓာတ်ဆီဆိုင်မှာ ဆီပေးနေပေမယ့် တန်းနေတာ အရှည်ကြီးပဲလို့သိရမယ်။ ပုံမှန်ဆို အိမ်မှာ ဓာတ်ဆီ လုံလုံလောက်လောက် ရှိတတ်ပေမယ့် ခုအချိန်က နွေရာသီဆိုတော့ ဆီလှောင်ထားတာ အပိုသိပ်မရှိဘူး ပြောတယ်။ ဒါပေမယ့် အိမ်ကလူတွေ အပြင် သိပ်ထွက်ဖြစ်မှာ မဟုတ်လို့ဓတ်ဆီသိပ်ကုန်မယ် မထင်ဘူး၊ ရှိတာလေးနဲ့မီးစက်မောင်းဖို့လုံလောက်နိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ တခြားဟာအတွက် မီးစက်မမောင်းပဲနေလို့ ရပေမယ့် ဟန်းဖုန်း ဘက်ထရီသွင်းဖို့ တော့ မောင်းမှဖြစ်မယ့် အကြောင်း အမေကပြောပြတယ်။ အခုဖုန်းပြောလို့ပြောဖို့ တောင် ညက မီးစက်မောင်းပြီး အားသွင်းထားရတာတဲ့လေ။
ဖယောင်းတိုင်တွေတာ သေချာတဲ့အတွက် သွားဝယ်တာ ၁၀ ထုတ် ၀ယ်လို့ရခဲ့တယ်လို့ ပြောတယ်။ ရှေ့ တစ်ပတ်က လကုန်ခါနီးမို့ဆန်၊ဆီ နဲ့ လိုအပ်တာ တွေ ၀ယ်ထားတာရှိလို့အစားအသောက်အတွက် မစိုးရိမ်ဖို့ မှာတယ်။ ပြူတင်းပေါက်ကွဲတာတွေ၊ ကားဂိုတောင် အမိုးပေါက်သွားတာတွေတော့ ပစ္စည်းတွေ ၀ယ်ရခက်သလို ၊ လုပ်ပေးမယ့် အလုပ်သမားလဲ ငှါးလို့ မရဘူး တာကြောင့် ချက်ချင်း ပြန်မပြင်နိုင်သေးဘူးတဲ့။ နေလို့ ဖြစ်နေတာပဲ လုပ်ထားတယ်။ အိမ်က ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူး၊ ရန်ကုန်မြို့ ပေါ်မှာတောင် ကိုယ့်ထက် အခြေအနေ ဆိုးတဲ့သူတွေက အများကြီးဆိုပြီး တခြား အသိအိမ်တွေအကြောင်း နည်းနည်းပြောပြတယ်။ မနေ့ ညက မီးစက်ဖွင့်ရင်း သတင်းကြည့်ဖြစ်လို့TV မှာအစိုးရက ကြော်ငြာတဲ့ ပျက်စီးမှု့ သတင်းတွေ သိရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ ကျွန်မလည်း အင်တာနက်ပေါ်က သတင်းတချို့ အမေ့ကို ပြောပြဖြစ်တယ်။
အလုပ်သွားဖို့ ရှိတာနဲ့စကားပြောတာ အမြန်ဖြတ်ရတယ်။ ဖုန်းမချခင် သတိရတာနဲ့ရေ ကိစ္စမေးဖြစ်တယ်။ မနေ့ ညနေ ဖူးကြီးရေ ပြန်လာတယ်တဲ့။ ကြည်ကြည်လင်လင်တော့ မရှိဘူး၊ လာတဲ့ ရေတွေက အနောက်တွေလို့ ပြောတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ရေပြန်လာတာ တော်သေးတယ်ပါ သေးတယ်။ သုံးဖို့ ရေ ရတာပေါ့။ သောက်ရေ အတွက်တော့ မီးစက်နဲ့အ၀ီဇိတွင်းက တင်မယ် ပြောတယ်။
ကျွန်မ အနေနဲ့အိမ်ကို ဖုန်းဆက်မရလို့ သာ ဘာတွေဖြစ်မှန်းမသိ၊ အိမ်ကလူတွေ အဆင်ပြေရဲ့လား၊ အိမ်နားမှာက အပင်ကြီးတွေ များလို့အိမ်ပေါ်တည့်တည့် အပင်တွေလဲသလား စိုးရိမ်ခဲ့တယ်။ အမှန်ဆို ကျွန်မ အိမ်အတွက် ဒီလောက် စိုးရိမ်စရာမရှိပါဘူး။ တစ်ခုခုဆိုတောင် ရန်ကုန်မြို့ ပေါ်၊ မြို့ ထဲက အိမ်တွေက အပျက်အစီးရှိတောင် သိပ်မကြာခင် ပြန်ထူထောင်နိုင်ကြမှာပါ။ ကုန်ဈေးနှုန်းတက်တောင် ၀ယ်ဖို့ပိုက်ဆံ ရှိမှာပါပဲ။ တကယ် စိုးရိမ်ရမှာက မြို့ ဆင်ခြေပုန်းက တစ်နေ့ လုပ်မှ တစ်နေ့ စားရတဲ့ သူတွေ နဲ့ဧရာဝတီ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသက လူတွေ အတွက်ပါ။ အဲ့ဒီလူတွေ ဘယ်လို လုပ်ကြမလဲ။ အင်း... လူဆိုတဲ့ အမျိုးက အတ္တကြီးတဲ့ အမျိုးဆိုတာ ဟုတ်မယ်။ တခြားသူတွေ အရေးထက်စာရင် ကိုယ့် အိမ်အတွက်၊ ကိုယ့်မိသားစုအတွက် အရင် စိုးရိမ်မိသွားတယ်။ :)
Posted by Nay Nay Naing at 5/06/2008 04:39:00 PM2comments
Cyclone Nargis hit Myanmar
ကိုယ်တိုင် ရေးချင်စိတ်မရှိတာ နဲ့သူငယ်ချင်းတချို့ရေးထားတဲ့ ပိုစ့်တွေနဲ့ဓာတ်ပုံ တင်ထားတဲ့ ဆိုဒ်တွေကို ညွှန်းလိုက်ပါတယ်။
Photos from Emails (Appoligies for disturbing scences) ကြည့်ရဲမှ ကြည့်ကြပါ။ (*** 09 May 2008)
Picasa : Nargis Cyclone Hit (Photos from Myanmar Cupid Community Forum) (*** 07 May 2008)
Flickr Photo - Cyclone Nargis (Above and Beyond) (230 photos) (Credit to PJ) (remove)
Nargis cyclone hit Yangon, Myanmar by Myo Kyaw Htun ( *** အမြဲ update လုပ်ပေးနေတယ်)
Nargis aftermath by TZA
Cyclone nargis (03-05-08) by SMA
Nargis Hits Yangon : ရက်စက်ပါ့ နာဂျစ်ရယ် By Ko Boyz
Nargis နောက်ဆက်တွဲများ By Ko Boyz
Nargis hit Yangon by Mg Thant Zin
Nargis နောက်ဆက်တွဲ သတင်းများ By Mg Thant Zin ( *** 05 May 2008)
Nargis နောက်ဆက်တွဲများ by Ko Boyz (May 05 Update)
Nargis Consequences2- Mg Thant Zin ( Update ***)
Photo Source :UNOSAT
Posted by Nay Nay Naing at 5/05/2008 12:01:00 PM0comments
ကမ္ဘာမြေမှာ ခိုလှုံရာ ခေါ်ဆိုတဲ့ အိမ်
ရံရွေတော် ထပ်ဝါစွာ ဆင်စွယ်နန်းအိမ်
ကမ္ဘာမြေမှာ ဖြူစင်စွာ အကြင်နာများဝေ....
ကလေးလေးတွေ နွေးထွေးဖို့ လေ
ကိုယ်တိုင်ငင် ၀ါချည်မျှင် ဖျင်တဘက်ရယ်..
ဒီအချိန်မှာ အိမ်အပြင်မှာ ကဗျာတွေ ရွတ်မယ်
ရင်ခွင်မှာ ရှင်သန်ရာ မှီခိုရာ အိမ်တစ်အိမ်ကို
ဒဏ္ဏာရီရာဇ၀င်လို ၀ိညာဉ်အိမ် စိန်စီရာ ရတာနာခြယ် သိင်္ဂါရီအိမ်.....
တစ္တေတစ်ကောင် ဟန်ဆောင်သလို မာယာကင်းမဲ့
ဒီနေ့အသေအချာ၊ အချိန်ယူ နားထောင် ဖြစ်သွားတဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်။ နားထောင်နေရင်း ဒီသီချင်း မနိုင်းနိုင်းစနေ ဘလော့မှာ စာသားနဲ့ တကွ တင်ပေးထားတာ သတိရလို့သွားပြန် ကြည့်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ အဲ့ဒီမှာ အိမ်သီချင်းအပြင် အရိုး ရေးသားပြီး ဓီရာမိုရ် ဆိုထားတဲ့ တခြား သီချင်းတစ်ပုဒ်လည်း တင်ပေးထားတာ တွေ့ ရတယ်။ ဓီရာမိုရ် - ငါတို့အိမ်
MP3 Credit to THKZ
Lyrics Credit to NineNineSaNay
Posted by Nay Nay Naing at 5/05/2008 12:55:00 AM4comments
BBQ Party @ Sembawang Park
စနေနေ့ညနေက နေးတစ်ဖိုရမ်မှ ရင်းနှီးတဲ့ သူငယ်ချင်းတချို့ နဲ့ အတူ Sembawang Park မှာ BBQ လုပ်စားဖြစ်တယ်။ ကိုယ်တိုင်ဘာမှ ၀င်မလုပ်ဖြစ်ပါဘူး။ သူများတွေ စီစဉ်တာကိုပဲ လူရောက်အောင်သွားပြီး စားဖြစ်တာလို့ပြောရမယ်။ ကျွန်မ ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာ ကင်တဲ့သူတွေက ကင်လို့ ၊ တခြား ပြင်ဆင်မှု့ တွေကလည်း ပြီးသလောက်ရှိနေပြီ။ ရယ်ဒီမိတ် ဆာတေးတွေ မှာတာတွေ ရှိသလို ကင်ဖို့ကြက်သား၊ ၀က်သားတွေ နဲ့တခြားဟာတွေ လည်း ပြင်ဆင်ပြီး ယူလာကြတာ တွေ့ ရတယ်။ ကြာဇံကြော် နဲ့ ခေါက်ဆွဲကြော်တွေလည်း ကြော်ပြီး ယူလာကြတယ်။ အားလုံးစားဖို့အသီအနှံတွေကို လည်း တာဝန်ယူ ယူလာသူတွေ ရှိတယ်။ ပြင်ဆင်ထားတဲ့ စားစရာတွေ အများကြီးမို့နောက်လူ ၈-၉ စားဖို့ တောင် လုံလောက်တဲ့ အတွက် သူငယ်ချင်းတွေကိုတောင် ဖုန်းဆက်ခေါ်ရတယ်။ ဒါတောင် အများကြီးပိုလို့အိမ်တွေတောင် ပြန်သည်သွားကြရတယ်တဲ့။
ရန်ကုန်မှာ သောကြာညကစပြီး မုန်တိုင်းဝင်၊ အပျက်အစီးတွေ အတော်များတယ် သိရတယ်။ ဒီမနက် အိပ်ယာနိုးကတည်းက အင်တာနက်ပေါ်မှာ သတင်းတွေရှာဖတ်၊ ဓာတ်ပုံတွေ လိုက်ကြည့် ဖြစ်တယ်။ ခုချိန်အထိ အိမ်ကို ဖုန်းခေါ်လို့ မရသေးဘူး။ ရန်ကုန်မှာ ဘာတွေ ဖြစ်နေနိုင်တယ်ဆိုတာ တွေးကြည့်ရင်း စိတ်သိပ်မကြည် ဖြစ်နေတယ်။ ဒီလို အချိန်မှာ ပျော်စရာ ကြုံတွေခဲ့ရတာတွေကို အသေးစိတ် ရေးချင်စိတ် မရှိဘူး။ နောင်တချိန်မှာ ပြန်ကြည့်နိုင်အောင် ဒီလို သွားခဲ့၊ စားခဲ့ကြတယ် ဆိုတာ သိအောင်ပဲ မနေ့ တုန်းက ရိုက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဓာတ်ပုံတချို့ ကိုပဲ မှတ်ထား၊ သိမ်းထားလိုက်တော့တယ်။
BBQ Party @ Sembawang Park ( 03 - May - 2008)
Posted by Nay Nay Naing at 5/05/2008 12:51:00 AM2comments
A special section, titled Myanmar (Burma) in Googl...
The results of the referendum! Believe It or Not??...
Free Calls to Burma from Austalia Telstra fixed-li...